Google Camera HDR + သည် RAW အထောက်အပံ့နှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည် Androidsis
ဂူဂဲလ်ကင်မရာ HDR + အက်ပလီကေးရှင်းကိုဂူဂဲလ်မှပိုင်ဆိုင်သောအခြားကိရိယာများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ယခုအချိန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ RAW ပုံသဏ္formatာန်နှင့် HDR ရိုက်ကွင်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများအတွက်အထောက်အပံ့.
ဂူဂဲလ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီးဂူဂဲလ်ကင်မရာဟုခေါ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီပိုင်စက်များပေါ်တွင်သာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အခြားဆိပ်ကမ်းများ၌တပ်ဆင်။ မရပါ။
သို့သော် third-party developer တစ်ယောက်သည်အခြားမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအတွက် application ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် update များထဲမှတစ်ခုတွင်မူ application သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Android operating system အလွန်ရေပန်းစားသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အတော်လေးပွင့်လင်းသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ developer များအနေဖြင့် Android အတွက် application များကိုဖန်တီးနိုင်သကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်မှတီထွင်ထားသော application များအတွက်လည်းအလားတူပင်။
မူရင်းဂူဂဲလ်ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းမှာကောင်းမွန်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်းတိုးတက်မှုအတွက်နေရာမရှိတော့ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်အိုင်ဗင်နစ်ခ်သည်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည် XDA, သုံးစွဲသူများစွာတောင်းဆိုထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ဖြစ်သောဥပမာ HDR algorithms များအကြားရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ် RAW format ဖြင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
RAW ပုံများတွင်အချက်အလက်များစွာပါဝင်ပြီး compress မလုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာတည်းဖြတ်ခြင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အားနည်းချက်တွေရှိသေးတယ်။ application ကို Snapdragon ပရိုဆက်ဆာတွေအတွက်သာထုတ်လုပ်ထားပြီး Exynos ကဲ့သို့သော SoC မော်ဒယ်များရှိသောအခြားကိရိယာများနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
XDA ၏အဆိုအရအချို့သောထုတ်ကုန်များသည် Google Camera HDR + နှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် LG G6, OnePlus 3, OnePlus 3T, Samsung Galaxy S8, OnePlus 5, LG V20 နှင့်တောင်မှ မရှိမဖြစ်ဖုန်း.
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်အခြားဆိပ်ကမ်းများတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် download လုပ်ပါနေသမျှကာလပတ်လုံးသင် Snapdragon ချစ်ပ်နှင့်အတူစက်ရှိသညျ။
ဒီမှာငါတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Francisco Ruiz မှာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုထားခဲ့တယ် ရှင်းပြသည် Snapdragon ပရိုဆက်ဆာဖြင့်မည်သည့် Android terminal ကိုမဆိုကင်မရာအပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း ထို့အပြင်၎င်းတွင် Android 7.0 Nougat သို့မဟုတ်မြင့်မားသော Android version များလည်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Google Camera HDR + သည် RAW အထောက်အပံ့နှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
Wileyfox လျင်မြန်စွာ2ပေါင်းစမ်းသပ်ပြီးအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကို။ ?
Snapdragon 430 / Android 7.1.1
Javier ဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်